Tips for Coaching Employees to Improve Performance (Part – 1) ﻿
Tips for Coaching Employees to Improve Performance (Part – 1)
ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေရန် လမ်းညွှန်ပြသမှုများပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ (အပိုင်း - ၁)
မန်နေဂျာများနဲ့ leader များဟာ လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးပါတဲ့သူများဖြစ်ကြသလို ထိရောက်မှုရှိသော လမ်းညွှန်ပြသမှုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိနေဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများကို Onboarding ပြုလုပ်ပေးရာတွင်နှင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှထွက်ခွာမှုနှုန်းကိုလျှော့ချပေးရာတွင်လည်း အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို တိုးတက်လာစေနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ အသိပညာများလွှဲပြောင်းသင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် အခြားသူများကို လမ်းညွှန်ပြသပေးမှု (Coaching) ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မိမိတို့သင်ယူလေ့လာထားတဲ့အရာများကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်နှင့် သင်ယူလေ့လာထားတဲ့အရာများကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းတို့အတွက် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင် အခြားအရေးကြီးသော leadership skill များနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများလည်း ရှိနေသေးသော်လည်း Coaching ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ Team တစ်ခုလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်စေဖို့အတွက် အဓိကအရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Coaching (လမ်းညွှန်ပြသခြင်း) ပြုလုပ်ပေးသည့်ပုံစံဖြင့် အုပ်ချုပ်ပုံနည်းလမ်းများဟာ အာဏာဖြင့်ခိုင်းစေသောပုံစံမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါက ယနေ့ခေတ်ဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင် ပိုမို၍ထိရောက်မှုရှိလာတာကိုလည်း လက်တွေ့သက်သေပြနိုင်တဲ့အရာများစွာရှိနေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများကို အမိန့်ပေးစေခိုင်းမည့်အစား လမ်းညွှန်ပြသမှုများကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်သောခေါင်းဆောင်များဟာ ပိုမို၍အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး သွက်လက်မှုရှိသောဝန်ထမ်းအင်အားကို စုစည်းနိုင်စွမ်းရှိတာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ထိုအရာက ကောင်းမွန်စွာတိုးတက်မှုရှိသော လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတစ်ရပ်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ငယ်ငယ်က အားကစားလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်များအတွင်း ဘောလုံးကစားရာတွင်ဖြစ်ဖြစ် (သို့မဟုတ်) အခြားသော ကစားနည်းတစ်မျိုးမျိုးတွင် ဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ Team အမျိုးအစား (၃) မျိုးကို တွေ့ရှိဖူးပါလိမ့်မယ် -
၁။ ဦးတည်ရာမဲ့လျှောက်ပြေးနေတတ်ပြီး မကြာခဏ မုန့်များနဲ့ အအေးများသောက်ရန် အနားယူတတ်သော ကလေးများ။
၂။ စည်းစည်းလုံးလုံးရှိပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော်လည်း ပျော်ရွှင်စွာလည်း ကစားတတ်သော ကလေးများ။
၃။ အာရုံစူးစိုက်မှုလွန်ကဲနေပြီး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကစားတတ်သော ကလေးများ။
ဒီအချက်အပေါ်မူတည်ပြီး သင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ . . . ကလေးများအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး အဖွဲ့အမျိုးအစား (၃) မျိုး ဘာလို့ကွဲသွားရတာလဲ? ဒါဟာ နည်းပြကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ဟာ ကာကွယ်မှုလွန်ကဲသော၊ အလိုလိုက်လွန်းသော နည်းပြမှ တာဝန်ယူထားပြီး၊ ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ မျှတစွာအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ နည်းပြက တာဝန်ယူထားကာ တတိယအဖွဲ့ကိုတော့ ကလေးများကို ပြင်းထန်စွာလေ့ကျင့်ပေးတတ်သော နည်းပြက တာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အဖွဲ့က အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ရော သင်ထင်မြင်မိပါသလဲ? ဒုတိယတစ်ခုက အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့်အနေနဲ့ရော သင့်လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ team member များကို ဒီလိုရလာဒ်များရရှိလာစေရန် ဘယ်လို လမ်းညွှန်ပြသမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါပြီ။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါမယ်။ နောက်ရက်များမှာ ကျွန်တော်တို့ (www.jobsinyangon.com) ကနေ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေနိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ပြသမှုများပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များကို အပိုင်း (၂) မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
ဒီ article လေးဟာ စာဖတ်သူပရိသတ်တို့အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။